အကောင်းဆုံးမဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူ & စက်ရုံ
Cofttek သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံး Magnesium L-threonate အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်လစဉ်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ ၃၃၀၀ ကီလိုဂရမ်နှင့်ပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (ISO9001 & ISO14001) ရှိသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate အမှုန့် (၅၃၇-၄၂-၈) ဗီဒီယို
မဂ္ဂနီစီယမ်, L-threonate အမှုန့် Specifications
အမည်: မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate
မော်လီကျူးအလေးချိန်: 294.495 g / mol
ဓာတုအမည်: မဂ္ဂနီစီယမ် (2R, 3S) -2,3,4-trihydroxybutanoate
နာမ်: မဂ္ဂနီစီယမ်, L-Threonate
InChI Key ကို: YVJOHOWNFPQSPP-BALCVSAKSA-L ကို
လျှောက်လွှာ: မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate သည်အများဆုံးစုပ်ယူနိုင်သောမက်ဂနီစီယမ်ပုံစံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေရန်၊ အိပ်စက်ခြင်းနှင့်အတူကူညီရန်နှင့်ယေဘုယျသိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
မဂ္ဂနီဆီယမ် L-threonate အမှုန့် (၇၇၈၅၇၁-၅၇-၆) NMR Spectrum
မဂ္ဂနီစီယမ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သိသည့်အဓိကဓာတ်သတ္တုဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့် ဦး နှောက်နှင့်အာရုံကြောတစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်-divalent cation (အပြုသဘောဆောင်သောအိုင်းယွန်း) သည်အာရုံကြော transmitter receptors များနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးအာရုံကြောအင်ဇိုင်းများအတွက် co-factor ဖြစ်သောကြောင့်အာရုံကြောပတ်လမ်းကြောင်းများသင့်လျော်စွာဖွဲ့စည်းရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ကျရောဂါနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာပြဿနာများကိုလျှော့ချရန်အခြေခံကျကျဖော်ထုတ်ထားသည်။ အလုပ်လုပ်နိုင်သောဆေးပညာနယ်ပယ်၌ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူအများစုသည်သူတို့၏လူနာများအတွက်သူတို့၏အလေ့အကျင့်များတွင်ဖြည့်စွက်မဂ္ဂနီစီယမ်ဓာတ်လိုအပ်ကြောင်းခံစားရသည်။ မဂ္ဂနီဆီယမ်အတွက်လက်ရှိအကြံပြုထားသောအစားအစာထောက်ပံ့ကြေးသည်လူအများစုအတွက်တစ်နေ့လျှင် ၃၀၀ မှ ၄၂၀ မီလီဂရမ်ကြားဖြစ်သည်။ သို့သော်မဂ္ဂနီဆီယမ်အတွက်ပျမ်းမျှလိုအပ်ချက် (EAR) ကိုအစားအစာမှတဆင့်မရနိုင်ပါ။ ကြောက်စရာစာရင်းဇယားတစ်ခုရှိနေတယ်။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးတွင်စိတ်ဒဏ်ရာရသော ဦး နှောက်ဒဏ်ရာ၊ အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများ၊ ပါကင်ဆန်နှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါများ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဒဏ်ရာ ဦး နှောက်ထိခိုက်ခြင်း၊ အဖျားတက်ခြင်းနှင့်အရိုးဆိုင်ရာအခြေအနေများကဲ့သို့ပြင်းထန်သောကျန်းမာရေးပြသနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်ဖြည့်စွက်မဂ္ဂနီစီယမ်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုပုံတွင်တွေ့ရသည်။ သို့သော်ဥာဏ်ရည်နှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများအတွက်ဖြည့်စွက်စာအဖြစ်မဂ္ဂနီဆီယမ်ကိုသုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခက်အခဲတစ်ခုရှိပါသည် - ၎င်းတို့သည် ဦး နှောက်ထဲသို့အလွယ်တကူရောက်ပုံမပေါ်ပါ။ မဂ္ဂနီဆီယမ် l-threonate ကိုတော်လှန်သောပုံစံတစ်မျိုးသည်ဤနေရာတွင်ကူညီနေပုံရသည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း-Magnesium L-Threonate အမှုန့်
အများအားဖြင့်ရရှိနိုင်သောမဂ္ဂနီဆီယမ်ဖြည့်စွက်အားများသည်စုပ်ယူမှုပိုမိုကောင်းစေရန်နှင့် Magnesium I-threonate လည်းရှိသည်။ ၎င်းသည်တည်ငြိမ်မှု၊ စုပ်ယူမှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီသောမဂ္ဂနီစီယမ်မော်လီကျူးများကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောပေါင်းစည်းမှုဖြင့်အောင်မြင်သည်။ Magnesium I-threonate သည်နောက်ဆုံးပေါ်မဂ္ဂနီစီယမ်ပုံစံဖြစ်သည်။ မက်ဆာချူးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့်ပေကျင်းရှိဆင်ဟွာတက္ကသိုလ်မှအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များအဖွဲ့သည် Magnesium I-threonate ကိုမဂ္ဂနီစီယမ်နှင့် I-threonate ပေါင်းစပ်။ ဗီတာမင် C ၏ metabolite ကိုပေါင်းစပ်တီထွင်ခဲ့သည်။ နောကျဆကျတှဲ လိုအပ်သောနေရာသို့ရောက်ရန် ဦး နှောက်အကာအကွယ်စစ်ဇကာမှတဆင့်လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ Magnesium I-threonate သည်သဘာဝမဟုတ်သော်လည်း၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်အလွန်သေးငယ်သည်။
Epsom ဆားများတွင်သဘာဝအားဖြင့်ရရှိနိုင်သော Magnesium sulphate ကိုခန္ဓာကိုယ်မှအလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အပြင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့လည်းရှိသည်။ threonic acid နှင့် magnesium တို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီး Magnesium I-threonate ကိုသွေးမှ ဦး နှောက်သို့အလွယ်တကူရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောဆားအဖြစ်ဖွဲ့စည်းသည်။ အစောပိုင်းတွင်၎င်းကိုအကြောသွင်းခြင်းဖြင့်သာအောင်မြင်နိုင်သည်။ တိရိစ္ဆန်သုတေသနအရ၎င်းသည်မဂ္ဂနီစီယမ်ကို ဦး နှောက်ဆဲလ်များထဲသို့ဆွဲသွင်းရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဤမဂ္ဂနီဆီယမ် I-threonate ဖြည့်စွက်အားဖြည့်ဆေးများနှင့် တွဲ၍ nootropics မိသားစုကိုဖွဲ့စည်းရန်အတွက်အထိရောက်ဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
Magnesium I-threonate သည်အလုပ်လုပ်သည်
ခေတ်သစ်အစားအစာတွင်မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓာတ်ချို့တဲ့ပြီး၎င်းမှရရှိနိုင်သောဆေးဝါးများသည်မဂ္ဂနီဆီယမ်အဆင့်ကိုပိုမိုမှေးမှိန်စေသည်။ အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံများစွာတွင်လူ ဦး ရေ ၅၀% အောက်သည်မဂ္ဂနီဆီယမ်၏နေ့စဉ်စားသုံးမှု (သို့) ထောက်ပံ့ကြေးနှင့်ပြည့်မီသည်။ ဦး နှောက်သည်မဂ္ဂနီဆီယမ်ပမာဏများစွာလိုအပ်သော်လည်းသွေးထဲတွင်အမြင့်ဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုရှိသည်။
အဓိက ဦး နှောက်ထိခိုက်မှု (သို့) ပျက်စီးခြင်း
ရယ်စရာကောင်းသည်မှာလုံလောက်သောမဂ္ဂနီဆီယမ်ပမာဏမရှိသဖြင့် ဦး နှောက်ဒေသတွင်၎င်း၏ထိရောက်မှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။ မဂ္ဂနီဆီယမ် l-threonate ဖြည့်စွက်အားဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်မှာအထူးသဖြင့်အစားအစာအရင်းအမြစ်များမှတဆင့်လုံလောက်သောမဂ္ဂနီစီယမ်ကိုမစားသုံးသောသူများသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောလက္ခဏာများပြသောအခါဖြစ်သည်။
Magnesium l-threonate ၏လုပ်ဆောင်မှု
၎င်းသည်မဂ္ဂနီဆီယမ်လိုအပ်သော ဦး နှောက်၏ညာဘက်နေရာကိုရောက်ရန်၎င်းမှတဆင့်ထိုးဖောက်သည်။
၎င်းသည်အသိစိတ်နှင့်သင်ယူမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်ကူညီသော ဦး နှောက်စွမ်းရည်တိုးတက်စေရန်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရန်တိုးတက်စေသည်။
၎င်းသည် ဦး နှောက်ဆဲလ်အသစ်များဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေသည်။
Magnesium I-threonate အမှုန့်အကျိုးကျေးဇူးများ
မဂ္ဂနီစီယမ်သည်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ မှန်ကန်သောအချိုးအစားဖြင့်ယူခြင်းသည်စိတ်ကိုမြှင့်တင်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိမှုကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ စွမ်းအင်ကိုမြှင့်တင်ပေးပြီးအိပ်စက်မှုအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေသည်။ မနက်ခင်း ဦး နှောက်မှိုင်းများ (စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ မှတ်ဥာဏ်အားနည်းခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုအားနည်းခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအားနည်းခြင်း) ကို Vestibular Migraine နှင့်တွေ့ရလေ့ရှိသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဦး နှောက်၏ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းသည် neuroplasticity (neural plasticity, or brain plasticity) ဟုလည်းခေါ်သည်။ ဤပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည် ဦး နှောက်သည်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှုအသစ်များ (အာရုံကြောဆုံဖြတ်တောက်မှုများ) ကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပြီးသင်ယူမှု၊ မှတ်ဥာဏ်၊ အပြုအမူနှင့်အထွေထွေသိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုထိခိုက်စေသည်။ Brain plasticity သည် ဦး နှောက်၏အိုမင်းရင့်ရော်မှုဖြစ်စဉ်တွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်၊ plasticity ဆုံးရှုံးခြင်းသည်သိမြင်မှုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဆုံးရှုံးစေသည်။ neuroplasticity (သို့) ဦး နှောက်ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီအပေါ်သုတေသနများတိုးလာပြီးကျန်းမာရေးပညာရှင်များနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များကအာရုံကြောဆဲလ်မဂ္ဂနီဆီယမ်ပမာဏမြင့်တက်ခြင်းက synapse သိပ်သည်းဆနှင့် plasticity ကိုမြှင့်တင်စေပြီးအလုံးစုံသိမြင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ကိုတိုးတက်စေသည်။ ၎င်းသည်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသော ဦး နှောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများတွင် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်အားဖြည့်ရန်ကူညီပေးမည့်အလားအလာရှိသောရလဒ်များကိုပြနေသည်။ မဂ္ဂနီဆီယမ် l-threonate သည် ဦး နှောက်ရှိမဂ္ဂနီစီယမ်ပမာဏကိုထိရောက်စွာမြှင့်တင်ရန်သွေး-ဦး နှောက်အတားအဆီးကိုဖြတ်ကျော်ရန် Magnesium l-threonate ကိုဖြတ်တောက်ခဲ့သည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ ကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်း၊ ခုခံအားစနစ်အားကောင်းစေခြင်း၊ မြင့်မားသော BP၊ အရိုးပွခြင်းနှင့်နှလုံးအခြေအနေများအပါအ ၀ င်အခြားကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများလည်းရှိသည်။
Magnesium l -threonate သည်စိတ်ကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်၊ အာရုံကြောများကိုပြေလျော့စေပြီးအဖျားတက်ခြင်းနှင့်အခြားအာရုံကြောဆိုင်ရာပြဿနာများကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့်သက်သာစေရန်ကူညီပေးသည်။
Magnesim l-threonate သည်အရိုးသိပ်သည်းဆကိုတိုးတက်စေခြင်း၊ ရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့ကျစေခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးအစာခြေလမ်းကြောင်းကိုရှင်းလင်းပေးသည်။
Magnesium I-threonate သည်အတော်လေးအသစ်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုရေရှည်သက်သေအထောက်အထားမရှိပေ။ ၎င်းသည်စစ်မှန်သောသုတေသန၏အရေးပါမှုကို ပို၍ ပင်တိုးစေသည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည်၎င်း၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုရရှိစေသည်။
Magnesium I-threonate ၏လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု
ထုတ်ဝေသောဆေးပညာဂျာနယ်တွင် Magnesium I-threonate ၏စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးအချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ မှတ်ဉာဏ်၊ အိပ်ရေးမ ၀ ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်သောကများခြင်းတို့ပါ ၀ င်သောသက်ကြီးရွယ်အိုများပါ ၀ င်သောလေ့လာရေးအဖွဲ့ကိုလုပ်ဆောင်မှုမှတ်ဉာဏ်၊ ဆုတ်ယုတ်သောမှတ်ဥာဏ်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက် ၄ မျိုးဖြင့်မှတ်သားခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ပန်းတိုင်များ၊ အစီအစဉ်ဆွဲခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့တွင်အထောက်အကူပြုသောကျွမ်းကျင်မှုများစွာပါ ၀ င်သည်။ ဘာသာရပ်များကို Magnesium I-threonate ဖြင့် ၃ လဆက်တိုက်စီမံခဲ့ပြီးမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း၎င်းသည်မဂ္ဂနီစီယမ်ပမာဏသိသိသာသာမြင့်တက်လာသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စာမေးပွဲနယ်ပယ်လေးခုလုံးတွင်ဘာသာရပ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်ဇီဝဗေဒအသက်အရွယ်ကိုလျော့ကျစေသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဤဘာသာရပ်များသည်သူတို့၏ ဦး နှောက်အရွယ်တွင် ၁၀ နှစ်ခန့်ငယ်သည်။ သို့သော် Magnesium I-threonate သည်အိပ်ပျော်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ခြင်း (သို့) စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချခြင်းတို့အတွက်အကူအညီနည်းသည်။
Magnesium I-threonate အမှုန့်အတွက်တိရစ္ဆာန်များအားလေ့လာပါ
Magnesium I-threonate အတွက်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများတွင်စိတ်ဝင်စားစရာတွေ့ရှိချက်အချို့ရှိခဲ့သည်။
Magnesium I-threonate နှင့်စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲရောဂါ
Magnesium I-threonate သည်သဘာဝအားဖြည့်အရာတစ်ခုအဖြစ်လုပ်ဆောင်သောမဂ္ဂနီစီယမ်ဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အာရုံကြော transmitter GABA ကိုငြိမ်သက်စေသည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်သောစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသောဓာတုပစ္စည်းများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ တိရစ္ဆာန်များတွင် Magnesium I-threonate ကိုစမ်းသပ်ခြင်းသည်၎င်းသည်စိုးရိမ်သောကရောဂါများ၊ အဖြစ်များသော phobias နှင့်စိတ်ဒဏ်ရာလွန်ရောဂါများကိုကူညီရန် bane တစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
Magnesium I-threonate သည် Alzheimer's and Dementia နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ
Magnesium I-threonate သည် dementia နှင့် Alzheimer's ရောဂါများကိုလည်းကုသရန်လူသိများသည်။ ကြွက်များနှင့်ကြွက်များကို Alzheimer သုတေသန၌ သုံး၍ သူတို့၏မှတ်ဉာဏ်နှင့် ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုသည်လူသားများနှင့်ဆင်တူသည်။ Magnesium I-threonate ကိုကြွက်များတွင်မှတ်ဥာဏ်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ကြွက်သားများကျဆင်းမှုကိုဖယ်ရှားရန်ကူညီခဲ့သည်။
မဂ္ဂနီဆီယမ်ပမာဏလျော့နည်းခြင်းနှင့်မှတ်ဥာဏ်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့အကြားဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အစားအသောက်များတွင်မဂ္ဂနီဆီယမ်ပမာဏမြင့်တက်ခြင်းသည် ဦး နှောက်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုသိသိသာသာဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သုတေသနသည်လူသားများတွင်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုသရုပ်ဖော်သောကြွက်များပေါ်တွင်စမ်းသပ်ထားသော neuroprotective အားသာချက်များစွာအပေါ်မျှော်လင့်ချက်ရှိသည်။
Magnesium I-threonate ကိုသင်ယူခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ ကျက်မှတ်သည်
Magnesium I-threonate ဖြင့်အုပ်ချုပ်သောအခါကြွက်များသည်၎င်းတို့ကိုပိုမိုထက်မြက်စေသည်။ ၎င်းတို့သည်ရေတိုနှင့်ရေရှည်အမှတ်တရများအပြင်သင်ယူရန်နှင့်တိုးတက်ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။
Magnesium Threonate အတွက်အထောက်အထားများနှင့်ပံ့ပိုးမှု
Magnesium threonate အကြောင်းကန ဦး သုတေသနတစ်ခုကပြသခဲ့သည်။ ပျက်စီးသွားသောခရိုမိုဆုန်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ အခြားမဂ္ဂနီဆီယမ်အမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဦး နှောက်တွင်မဂ္ဂနီဆီယမ်ပမာဏမြင့်တက်ခြင်း၊ မှတ်ဥာဏ်ဧရိယာ၌ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရေတိုမှတ်ဉာဏ်များပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအားလုံးထက်သာလွန်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်၌မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆိုမဂ္ဂနီဆီယမ်စားသုံးခြင်းဖြင့်ကြွက်သားဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ပရိုတိန်းများနှင့်အဆီအက်ဆစ်များဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဗီတာမင်ဘီများစတင်ခြင်း၊ သွေးခဲခြင်း၊ အင်ဆူလင်ကိုလျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့် ATP ဖွဲ့စည်းခြင်းတို့အပါအ ၀ င်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကိုလုပ်ဆောင်ရန်မျှော်လင့်သည်။ ထို့ပြင်မဂ္ဂနီစီယမ်သည်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ရှိအမျိုးမျိုးသောအင်ဇိုင်းများအတွက်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုတည်ဆောက်ရာတွင်လည်းကူညီသည်။
Magnesium I-threonate ဖြည့်စွက်အားဆေးများကိုရွေးချယ်ခြင်း
ဖြည့်စွက်စာတွင်ပါ ၀ င်သောအညွှန်းများကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ မဂ္ဂနီဆီယမ် I-threonate.
Magnesium I-threonate အမှုန့်ကိုထောက်ခံသောပမာဏ
ပုံမှန်အားဖြင့်အမျိုးသားများအတွက်မဂ္ဂနီဆီယမ်စားသုံးမှုသည် ၄၂၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးများတွင် ၃၂၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အသက်အရွယ်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ Magnesium I-threonate ကိုအထူးစားသုံးရန်အထူးအကြံပြုထားသည်။ တစ်နေ့လျှင် ၁၅၀၀ မှ ၂၀၀၀ မီလီဂရမ်သည်လက်တွေ့သိမြင်မှုဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများအတွက်နည်းလမ်းကောင်းဖြစ်သင့်သည်။ အရောင်းရဆုံးဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် Magtein သည်တိရစ္ဆာန်များနှင့်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော Magnesium I-threonate အတွက်မူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ထိရောက်သောဖြည့်စွက်စာများ သုံး၍ ခိုင်မာသောဖော်မြူလာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
Magnesium I-threonate ၏အကြံပြုထားသောပမာဏမှာ-
အသက် ၁၃ နှစ်အောက်ကလေးများ-တစ်နေ့လျှင် ၈၀ မှ ၂၄၀ မီလီဂရမ်
ဆယ့်လေးနှစ်အထက်အမျိုးသမီးများ -တစ်နေ့လျှင် ၃၀၀ မှ ၃၆၀ မီလီဂရမ်
အသက် ၁၄ နှစ်အထက်အမျိုးသားများ-တစ်နေ့လျှင် ၄၀၀ မှ ၄၂၀ မီလီဂရမ်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်/ နို့တိုက်မိခင်များ- တစ်နေ့လျှင် ၃၁၀-၄၀၀ မီလီဂရမ်
ဤပမာဏသည်ကြီးကြီးမားမားသောက်သုံးသောပုံသဏ္lookန်တူနေသော်လည်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာစုပ်ယူနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ထို့ကြောင့်မဂ္ဂနီဆီယမ် l-threonate ၂၀၀၀ မီလီဂရမ်သည်မဂ္ဂနီဆီယမ်အတွက်အကြံပြုထားသောအစားအစာ၏သုံးပုံတစ်ပုံခန့်ဖြစ်သောဒြပ်စင်မဂ္ဂနီစီယမ် ၁၄၄ မီလီဂရမ်ကိုသာပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် glycinate, citrate သို့မဟုတ် gluconate ကဲ့သို့သောမဂ္ဂနီစီယမ်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုစဉ်းစားခြင်းမှသင့်ကိုတားဆီးခြင်းမရှိချေ။ မဂ္ဂနီစီယမ်စားသုံးမှုအတွက်ကောင်တာပေါ်မှရနိုင်သောဖော်မြူလာများစွာရှိသည်။ မဂ္ဂနီဆီယမ်လုံလောက်စွာစားသုံးခြင်းကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၏လက္ခဏာမှာဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့်အနီရောင်အချက်ပြခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
Magnesium l-threonate သည်အလုပ်လုပ်ရန်အချိန်မည်မျှကြာသနည်း။
ပါးစပ်အားစားသုံးမိပါက Magnesium l-threonate သည် ဦး နှောက်တွင်မဂ္ဂနီဆီယမ်ပမာဏကိုမြင့်တက်ရန်အနည်းဆုံးတစ်လကြာရန်လိုအပ်ပြီးစိတ်ကျရောဂါ၊ စိုးရိမ်သောကနှင့်အသက်အရွယ်ကြောင့်မှတ်ဥာဏ်ဆုံးရှုံးခြင်းကဲ့သို့မှတ်ဥာဏ်ကိုသိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှု။
Magnesium I-threonate ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Magnesium I-threonate ၏လူသိများသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာအိပ်ငိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မသက်မသာဖြစ်ခြင်းနှင့် ၀ မ်းလျှောခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ မဂ္ဂနီဆီယမ်ဖြည့်စွက်စာ၏လူသိများသောအဖြစ်များသောအရာသည်အစာခြေစနစ်ကိုထိခိုက်စေသည်။ သို့သော် Magnesium I-threonate ဖြင့်၎င်းသည် ဦး နှောက်ထဲသို့တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းရန်ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်မဖြစ်ပွားသင့်ပါ။ သင်သည်အခြားမည်သည့်ဆေးဝါးကိုမဆိုသုံးနေပါကပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်အတွက်သင်၏ဆရာဝန် (သို့) ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။ မဂ္ဂနီဆီယမ်ကိုကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူများအားသင့်ခန္ဓာကိုယ်မှမဂ္ဂနီစီယမ်ကိုအများအားဖြင့်စုပ်ယူသောကြောင့်ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူများအားမထောက်ခံပါ။
တကယ့်မေးခွန်းက-Magnesium I-threonate ကိုအခြားမဂ္ဂနီစီယမ်နဲ့ယူသင့်သလား ဖြည့်စွက်? အကယ်၍ သင်သည်အစာချေဖျက်မှုအတွက်မဂ္ဂနီစီယမ်ကိုယူနေပါက Magnesium I-threonate ကိုသောက်ကြည့်ပါ။ သင်ဝမ်းချုပ်ခြင်း (သို့) ဝမ်းချုပ်ခြင်းခံစားရပါက၎င်းသည်မဂ္ဂနီဆီယမ်သို့သူ့ဘာသာသူပြန်ပြောင်းရန်သတိကြီးစွာထားသင့်သည်။ ကဖိန်းဓာတ်ပါသောမဂ္ဂနီစီယမ် l-threonate သည်မှတ်ဥာဏ်နှင့်ကာယစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်း၎င်းကိုမှီခိုပါက၎င်းသည်အဆက်မပြတ်မစားလျှင်ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မကောင်းခြင်းနှင့်စိတ်တိုခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤအရာသည်လူအချို့တွင်စိတ်အခြေအနေများပြင်းထန်စွာပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သူတို့၏ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားမှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်စိတ်ပါဝင်စားမှုနှင့်ထက်သန်မှုမရှိခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းမှာစစ်မှန်သောအပြောင်းအလဲကိုသင်သတိပြုမိရန်အချိန်မည်မျှကြာမည်နည်း။ ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများကသင်၏သေနတ်များမပစ်မီအနည်းဆုံး ၄ ပတ်မှ ၈ ပတ်စောင့်ရန်အကြံပြုသည်။
Magnesium l-threonate ကိုမည်သူမသုံးသင့်သနည်း။
အထိန်းအကွပ်မရှိ BP မြင့်သူ (ပေါင် ၁၄၀/၉၀ mmHg)
အမျိုးအစား ၁ ဆီးချိုရောဂါခံစားနေရသူများ
Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome ကဲ့သို့သောခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါရှိသူများ
carotid အသီးများ၊ အတည်ပြုထားသော lacunes များ၊ ယာယီ ischemic တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်သိသိသာသာအဆုတ်ရောဂါခံစားနေရသူများ
ဖြည့်စွက်စာများသည် positron emission tomography (PET) scan ကိုလွန်ခဲ့သောခြောက်လအတွင်းလေဖြတ်ခြင်း (သို့) တစ်နာရီကြာအိပ်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်းအပါအ ၀ င်အခြေအနေများရှိသူများဖြစ်သည်။
ဓာတ်မတည့်ခြင်း (သို့) ဓာတ်မတည့်ခြင်းရှိသူများသည်ဖြည့်စွက်စာတွင်အသုံးပြုသောမည်သည့်ပါဝင်ပစ္စည်းကိုမဆိုသတိထားမိသည်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်များ၊ နို့တိုက်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ရရန်စီစဉ်နေသောအမျိုးသမီးများသည်ဤဆေးကိုမသောက်မီဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်
မှန်ကန်သောဖြည့်စွက်စာရွေးချယ်ခြင်း-Magnesium l-threonate ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အိပ်ချိန်မမှန်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအားနည်းသောသူများသည်ဤဖြည့်စွက်စာကိုသုံးသည်။ မဂ္ဂနီဆီယမ် l-threonate သည်ဗီတာမင်-C threonate ပါ ၀ င်သောကြောင့်အခြား Magnesium l-threonate ဖြည့်စွက်စာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် bioavailability ပိုမိုမြင့်မားစေသည်။ ဖြည့်စွက်စာသည် ဦး နှောက်၌လုံလောက်သောမဂ္ဂနီစီယမ်ကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးမှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်သွေး-ဦး နှောက်အတားအဆီးကိုဖြတ်ကျော်ရန်အလားအလာရှိသည်။ မဂ္ဂနီဆီယမ်ကို theanine နှင့်အခြားအရေးကြီးသောဓာတ်သတ္တုများနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အားအခြားဗီတာမင်များနှင့်သတ္တုဓာတ်များကိုမလျှော့ချဘဲနေ့စဉ်အာဟာရလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။
Magnesium l-threonate သည်အသက် ၅၀ အထက်ရှိသူများတွင်မှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးတက်စေသည်၊ သတိမေ့ရောဂါ၊ ပါကင်ဆန်ရောဂါသို့မဟုတ်အာရုံကြောအားနည်းရောဂါလက္ခဏာများခံစားနေရသည်
ဖြည့်စွက်စာကိုနေ့စဉ်သုံးခြင်းသည်မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေသည်၊ မှတ်ဥာဏ်နှင့်သိမြင်မှုစွမ်းရည်ကိုသုံးဆမှရက်ခြောက်ဆယ်အတွင်းအချိန်တစ်ဆယ့်ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးစေသည်။ ၎င်းသည်ကြွက်သားများကိုပြေလျော့စေသောသက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးပေးပြီးချက်ချင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သိမြင်မှုအာနိသင်ကိုပေးသည်။
လူအချို့သည်ဆေးပြားတွင် gelatin ပါ ၀ င်သောကြောင့်အစာကြေရန်လွယ်ကူပြီးအစာကြေလွယ်သောဆေးပြားတွင် gelatin ဖုံးအုပ်ထားသောကြောင့်အဆင်ပြေသည်။ gelatin ဖြင့်အုပ်ထားသောဆေးပြားများသည်အစာခြေလမ်းကြောင်းမှအဆိပ်များကိုဖယ်ရှားပေးသည်
ဖြည့်စွက်စာတွင် threonate ပါဝင်မှုသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုဖယ်ရှားပေးပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပြီးအိပ်ပျော်စေသည်။ ကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်းသည်ဂနာမငြိမ်သောခြေထောက်ရောဂါ (သင့်ခြေထောက်များကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သောစိတ်ဆန္ဒကိုဖြစ်ပေါ်စေသော) နှင့်ကြည်လင်သောအိပ်မက်များကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ဖြည့်စွက်အားအစာစားပြီးသို့မဟုတ်အိပ်ရာမ ၀ င်မီယူသင့်သည်။ RDA သည်တစ်နေ့လျှင် ၃ တောင့်မှ ၄ တောင့်ကိုအစာနှင့် တွဲ၍ စားနိုင်သော်လည်းအစာချေလမ်းကြောင်းများအလွန်တက်ကြွနေချိန်တွင်ပိုမိုမြန်ဆန်သောရလဒ်များပေးနိုင်သည်။
အားဖြည့်ဆေးတွင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းဆုံးရှိသည်။ ဆိုးရွားသောအရာများတွင်အစာအိမ်နာခြင်းနှင့်ပျော့ပျောင်းသောသူများသည်ခေါင်းကိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အိပ်ငိုက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့် Magnesium l-threonate သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းဆုံးနှင့်နေ့စဉ်ဖြည့်စွက်စာအဖြစ်စားရန်လုံးဝလုံခြုံသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။
Magnesium l-threonate ကိုဘယ်မှာရနိုင်သလဲ။
ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ရောင်းသူများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဖြည့်စွက်စာဖြစ်သော Magnesium I-threonate ကိုရောင်းသည်။ ၎င်းကိုအွန်လိုင်းတွင်လည်းအလွယ်တကူရနိုင်ပြီး၎င်းကို ၀ ယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်သတိပြုရမည့်အချက်တစ်ခုမှာစျေးအပေါဆုံးသည်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပေ။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သိုလှောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအသိမှတ်ပြုထားသောအကောင်းဆုံးတံဆိပ်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်နာမည်ကောင်းလက်လီအရောင်းဆိုင်နှင့်ထုတ်လုပ်သူတို့ကိုအမြဲရှာဖွေပါ
မဂ္ဂနီဆီယမ် l-threonate အမှုန့်သြစတေးလျ
သြစတေးလျတွင်ဖြည့်စွက်စာကိုအမှုန့်နှင့်ဆေးတောင့်နှစ်မျိုးလုံးတွင်ရနိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်ကို Neuro-Mag Magnesium l-threonate Powder အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်
စျေးနှုန်း - AUD ၄၃.၂၈
စားသုံးနိုင်သောအရွယ်အစား ၁ ဇွန်း (ခန့်မှန်း ၃.၁၁ ဂရမ်)
ကွန်တိန်နာတစ်လုံးလျှင် ၃၀ နှုန်း
ဖြည့်စွက်စာတစ်ခု (Neuro-Mag® Magnesium l-threonate) သည် magnesium l-threonate ၂၀၀၀ မီလီဂရမ်ကို ultra-absorbable element Mg ၁၄၄ မီလီဂရမ်သို့ပေးသည်။ ဦး နှောက်သည် ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးနုပျိုစေသောအသိဥာဏ်ကိုဖြည့်တင်းပေးသည်။ ဖြည့်စွက်စာသည် ဦး နှောက်ဆဲလ်များအကြား synaptic ဆက်သွယ်မှုများကိုထိန်းသိမ်းပေးပြီးကျန်းမာသော ဦး နှောက်ဆဲလ်အချက်ပြလမ်းကြောင်းများကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ၎င်းသည်အရသာရှိသောအပူပိုင်းဒေသအသီးဖောက်အရသာမှုန့်အချိုရည်ရောစပ်သည်။
Citric acid, gum acacia, maltodextrin, သဘာဝအနံ့အရသာ, stevia extract, silica
မဂ္ဂနီဆီယမ် l-threonate အမှုန့်သည်ကနေဒါနိုင်ငံဖြစ်သည်
ကနေဒါနိုင်ငံတွင်ဖြည့်စွက်စာကို Naka Platinum Magnesium l-threonate အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်
စျေးနှုန်း - CAD ၄၆.၉၉
Naka Pro's Pro MG12 Magnesium l - threonate ကိုကနေဒါနိုင်ငံတွင်ဖြည့်စွက်စာအဖြစ်ရရှိနိုင်စေသောတစ်ခုတည်းသောမဂ္ဂနီဆီယမ်ပုံစံကို ဦး နှောက်တွင်မဂ္ဂနီဆီယမ်အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောမဂ္ဂနီဆီယမ်ပုံစံဖြစ်သည်။ Mg ၁၄၄ မီလီဂရမ်နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ် l-threonate PRO MG144 တို့ပါ ၀ င်သောကြောင့် ဦး နှောက်ကိုမှတ်ဉာဏ်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးပြီး Alzheimer ရောဂါ၏အစောပိုင်းရောဂါလက္ခဏာများကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ-ဆေးတောင့် ၃ တောင့်တိုင်းတွင် Magnesium l-threonate ၂၀၀၀ မီလီဂရမ် (ဒြပ်စင် ၁၄၄ မီလီဂရမ်) ပါ ၀ င်သည်။
Microcrystalline cellulose, magnesium stearate (ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရင်းမြစ်), hypromellose (ဆေးတောင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများ) ။ ၊ gluten, အခွံမာသီးများ၊ ဥများ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ ငါးသို့မဟုတ်အခွံ၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ၊ ပြောင်း၊ အရောင်အတုများ၊ အရသာများ၊ ဂျုံ (သို့) တဆေး၊
မဂ္ဂနီစီယမ် l-threonate အမှုန့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
မဂ္ဂနီဆီယမ်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာမှုအတွက်အလွန်အရေးပါသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်၏စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်စစ်မှန်သောကုထုံးသည် ဦး နှောက်၏အကာအကွယ်အလွှာမှတဆင့်ထိုးဖောက်ရန်၎င်း၏အရည်အချင်းမရှိခြင်းကြောင့်လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားသည်။ Magnesium I-threonate သည်အလိုရှိသော ဦး နှောက်ဒေသများသို့တိုက်ရိုက်ရောက်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုရင်ဆိုင်နိုင်သည်။ လူအများစုကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမဂ္ဂနီဆီယမ်ချို့တဲ့တာကြောင့်မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားနေရတာကြောင့်ပြသနာကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ဦး နှောက်စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေဖို့ Magnesium I-threonate အမှုန့်ကိုထိုးပေးဖို့ကျိန်းသေပါတယ်။
ရရှိသောအချက်အလက်များသည်သုတေသနပစ္စည်းများနှင့်တွေ့ရှိချက်များပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ၎င်းသည် FDA မှထောက်ခံချက်မရသေးဘဲမည်သည့်ရောဂါသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးပြသနာများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်၊ ကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်ကာကွယ်ရန်မရည်ရွယ်ပါ။
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးကဖြည့်စွက်စာတွေကိုဆေးဝါးအကဲဖြတ်တာနဲ့စောင့်ကြည့်တာနဲ့တူတာကြောင့် NSF International (အမေရိကန်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးနှင့်အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့အစည်း) ကဲ့သို့တတိယအဖွဲ့အစည်းများ၏အသိအမှတ်ပြုတံဆိပ်များကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ လုံခြုံမှုနှင့်အရည်အသွေးအတွက် Labdoor သို့မဟုတ် Underwriters ဓာတ်ခွဲခန်းများ
Xu T, Li D, Zhou X, Ouyang HD, Zhou LJ, Zhou H, Zhang HM, Wei XH, Liu G, Liu XG မဂ္ဂနီစီယမ် -L-Threonate ၏နှုတ်ဖြင့်အသုံးပြုခြင်းသည် Vincristine-induced Allodynia နှင့် Hyperalgesia ကို Tumor Necrosis Factor-α / Nuclear Factor-κBအချက်ပြမှု၏ပုံမှန်အားဖြင့်တက်သည်။ မေ့ဆေးဗေဒ။ 2017 ဇွန်; 126 (6): 1151-1168 ။ Doi: 10.1097 / ALN.0000000000001601 ။ PubMed PMID: 28306698 ။
ဝမ်ဂျ၊ လျူ Y၊ Zhou LJ၊ ဝူယ၊ လီ F၊ Shen KF၊ Pang RP၊ ဝေ XH၊ Li YY၊ Liu XG မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည် TNF-αအားတားဆီးခြင်းဖြင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာနာကျင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်မှတ်ဉာဏ်လိုအပ်ချက်ကိုကာကွယ်ပြီးပြန်လည်ရယူသည်။ နာတာရှည်ဆရာဝန်။ 2013 စက်တင်ဘာ - အောက်တိုဘာ; 16 (5): E563-75 ။ PubMed PMID: 24077207 ။
Mickley GA, Hoxha N, Luchsinger JL, Rogers MM, Wiles NR နာတာရှည်အစာအာဟာရမဂ္ဂနီစီယမ် - L - ထရွန်နိတ်သည်မျိုးသုဉ်းခြင်းကိုမြန်စေပြီးအရသာခံခြင်းကိုမနှစ်သက်သည့်အလိုအလျောက်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav ။ 2013 ခုနှစ်မေလ; 106: 16-26 ။ Doi: 10.1016 / j.pbb.2013.02.019 ။ Epub 2013 ခုနှစ်မတ်လ 6. PubMed PMID: 23474371; PubMed ဗဟို PMCID: PMC3668337 ။